"အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း" - ကောက်နှုတ်ချက်ကို Prause et al ။ , 2015 - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - Brain On Your Brain
“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း "- ကောက်နုတ်ချက်သုံးသပ်ချက် Prause et al ။ , 2015
အပြည့်အဝလေ့လာမှုနှင့်လင့်ခ် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ကောက်နုတ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Prause et al။ , 2015
A Prause et al အားဖြင့် 2015 EEG လေ့လာမှု။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ (3.8 s ကိုထိတွေ့မှု) ကြည့်ရှုအားပေးအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှု၎င်းတို့၏ကြည့် (0.6 ဇ / ရက်သတ္တပတ်ဆိုလို) အကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်နေခဲ့ကြသောသူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏နှိုင်းယှဉ်လျှင်မကြာခဏကြည့်ရှု (1.0 ဇ / ရက်သတ္တပတ်ဆိုလို) . Kühnနှင့် Gallinat မှုနဲ့အပြိုင်တဲ့တွေ့ရှိချက်များတွင်မကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှု [ထိန်းချုပ်မှုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှလျော့နည်းအာရုံကြော activation (LPP) ပြသ130] ။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပိုမိုအမြင်အာရုံဆွလိုအပ်ကြောင်းအကြံပြု167,168]။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Kühnနှင့် Gallinat ပိုမိုမြင့်မားသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားအနိမ့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီ circuitry အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမသက်ဆိုင်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်၏မသင့်လျော်အပြုအမူရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောထားပြီး  ။ Kühnနှင့် Gallinat နှင့်အညီ, neuropsychological လေ့လာမှုများ [ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျဘာစွဲဆီသို့ပိုမိုမြင့်မားသဘောထားကိုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု function ကိုလျှော့ချခဲ့ကြကြောင်းသတင်းပို့53,114].